ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား စံပြအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်...! - Thadin
HomeCELEBRITYကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား စံပြအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်…!
ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား စံပြအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်…!
February 2, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား စံပြအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်…!
ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဆုရှင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်က (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးမှာ ကမ္ဘာက လေးစားရတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍထဲက မြန်မာပြည်ဖွား စံပြအမျိုးသမီးဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ ကမ္ဘာက လေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား တစ်ဦးအဖြစ် (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုပေးပွဲကြီးမှာ စံပြအမျိုးသမီး ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်… ဒီအတွက် သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံ စကားကိုလည်း အခုလို ပြောပြလာပါတယ်…
‘’ ဒီဆုကို ရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဂုဏ်လည်းယူမိပါတယ်။ ဒီဆုကို ရတဲ့အတွက် တာဝန်လည်း ကြီးသွားတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ကိုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးနိုင်သလောက် ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်’’ ဆိုပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားရင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကဏ္ဌအသီးသီးက ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေကို ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်တဲ့ (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုပေးပွဲကြီးရဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍမှာ ဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…
‘’ဘက်စုံထူးချွန်သော အကယ်ဒမီဆုများရှင် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်၊ အလှအပနှင့် ဆိုင်သောဆုများစွာရရှိထားသူ၊ ပရိတ်သတ်များက လေးစားအားကျ အတုယူရသော စံပြအမျိုးသမီး – အိန္ဒြာကျော်ဇင် – ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား’’ ဆိုပြီးတော့ (Pride Of Myanmar A Ward Facebook Page) မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ ည (၉)နာရီ (၅၇)မိနစ်က ရေးသားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်…
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ (၂၀၀၄)ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု အဖြစ် ‘’ မျက်နှာများတဲ့ မိုးကောင်းကင်’’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၇)ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ‘’ရင်ဘတ်ထဲက ဓား’’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဒုတိယမြောက် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…
အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အနုပညာလောကထဲကို (၁၉၉၆) ခုနှစ်ကစပြီး မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ Miss Contest ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Miss Kokkine နှင့် Miss Christmas ဆုများကို တစ်နှစ်တည်းမှာပင် ရရှိခဲ့သည် ။ တီဗီ ကြော်ငြာပေါင်းများစွာ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ၊ ဗီဒီယုို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ တို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်….
Photo Source : Win Ni
ကမ်ဘာကလေးစားရတဲ့ မွနျမာပွညျဖှား စံပွအနုပညာရှငျအမြိုးသမီးဆုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့တဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျ
ထပျဆငျ့အကယျဒမီဆုရှငျ အိန်ဒွာကြျောဇငျက (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုခြီးမွှငျ့ပှဲကွီးမှာ ကမ်ဘာက လေးစားရတဲ့ ဖြျောဖွရေေးကဏ်ဍထဲက မွနျမာပွညျဖှား စံပွအမြိုးသမီးဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ…
အိန်ဒွာကြျောဇငျဟာ ကမ်ဘာက လေးစားရတဲ့ မွနျမာပွညျဖှား တဈဦးအဖွဈ (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုပေးပှဲကွီးမှာ စံပွအမြိုးသမီး ဆုကို ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ… ဒီအတှကျ သူ့ရဲ့ ရငျခုနျသံ စကားကိုလညျး အခုလို ပွောပွလာပါတယျ…
‘’ ဒီဆုကို ရတဲ့အတှကျ အရမျးဝမျးသာပါတယျ။ ဂုဏျလညျးယူမိပါတယျ။ ဒီဆုကို ရတဲ့အတှကျ တာဝနျလညျး ကွီးသှားတယျလို့ ထငျမိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ အတှကျကိုလညျး ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျက အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ပံ့ပိုးနိုငျသလောကျ ကွိုးစားသှားမယျလို့လညျး ပွောခငျြပါတယျ’’ ဆိုပွီးတော့ စိတျလှုပျရှားရငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ…
အကယျဒမီအိန်ဒွာကြျောဇငျက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကဏ်ဌအသီးသီးက ထူးခြှနျထကျမွကျသူတှကေို ရှေးခယျြဆုခြီးမွှငျ့တဲ့ (Pride Of Myanmar Awards 2018) ဆုပေးပှဲကွီးရဲ့ ဖြျောဖွရေေး ကဏ်ဍမှာ ဆုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ…
‘’ဘကျစုံထူးခြှနျသော အကယျဒမီဆုမြားရှငျ အမြိုးသမီး သရုပျဆောငျ၊ အလှအပနှငျ့ ဆိုငျသောဆုမြားစှာရရှိထားသူ၊ ပရိတျသတျမြားက လေးစားအားကြ အတုယူရသော စံပွအမြိုးသမီး – အိန်ဒွာကြျောဇငျ – ကမ်ဘာကလေးစားရတဲ့ မွနျမာပွညျဖှား’’ ဆိုပွီးတော့ (Pride Of Myanmar A Ward Facebook Page) မှာ ဖဖေျောဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ ည (၉)နာရီ (၅၇)မိနဈက ရေးသားခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ…
အိန်ဒွာကြျောဇငျဟာ (၂၀၀၄)ခုနှဈအတှကျ အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆု အဖွဈ ‘’ မကျြနှာမြားတဲ့ မိုးကောငျးကငျ’’ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျ အကယျဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ (၂၀၁၇)ခုနှဈအတှကျ အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီး ဇာတျဆောငျဆုကို ‘’ရငျဘတျထဲက ဓား’’ ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ဒုတိယမွောကျ အကယျဒမီ ထူးခြှနျဆုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ…
အိန်ဒွာကြျောဇငျက အနုပညာလောကထဲကို (၁၉၉၆) ခုနှဈကစပွီး မျောဒယျတဈယောကျအနနေဲ့ ဝငျရောကျလာခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ Miss Contest ပွိုငျပှဲမြားတှငျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး Miss Kokkine နှငျ့ Miss Christmas ဆုမြားကို တဈနှဈတညျးမှာပငျ ရရှိခဲ့သညျ ။ တီဗီ ကွျောငွာပေါငျးမြားစှာ၊ ရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ၊ ဗီဒီယို ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ တို့ကို ရိုကျကူးခဲ့သူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ရိုကျကူးနရေတဲ့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈဦးလဲ ဖွဈပါတယျ….
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တပတ်စာ အခမဲ့ဟောစာတမ်း (Feb32019 မှ Feb92019 ထိ)
နာမည်ကြီးနေသော ဆီးချိုကိုကျ၊ မျက်စေ့တိမ်စွဲ၊ ဆီးရောဂါနဲ့ ဆီးမှာ ကျောက်တည်တာတွေ ပျောက်တဲ့ ဝါးရေ…!
This Year : 175075
Total Users : 534099
Total views : 2415845